Tag: nkezi iji uru | Martech Zone
Tag: nkezi iji uru
Tydị 10 nke Mgbasa Ozi Email You Kwesịrị Ime
Na-arụ ọrụ na ọtụtụ ndị na-ere ozi email, ọ na-eju m anya mgbe niile na enweghị ezubere tupu oge a, imepụta mkpọsa email na-arụ ọrụ n'ime akụkọ banyere mmejuputa. Ọ bụrụ na ị bụ ikpo okwu na-agụ nke a - ị kwesịrị ịnwe mkpọsa ndị a iji gaa na sistemụ gị. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ere ahịa email, ị kwesịrị ị na-arụ ọrụ iji tinye ọtụtụ ụdị ozi ịntanetị na-akpali akpali ị nwere ike ịbawanye njikọ, nnweta, njigide na ohere ọfụma. Ahịa ndị na-anaghị eji email kpatara
Mcommerce na-eto 200% Ọsọ ọsọ karịa Ecommerce
Wednesday, September 21, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
You chetara ihe mbụ ị zụtara na ekwentị mkpanaaka gị? Amachaghị m mgbe m mechara zụta ngwa ahịa mbụ m, ana m eche na ọ bụ site na ngwa mkpanaka Amazon ma ọ bụ nke Starbucks. Purchazụta ekwentị nwere oke ike - otu bụ ịdị mfe nke iji na teknụzụ, nke ọzọ na-atụkwasị azụmahịa ahụ obi. Nzụta ekwentị na-aghọzi nke abụọ, agbanyeghị, ọnụ ọgụgụ sitere na Coupofy gosipụtara ya. N'ezie,
25% nke Email ịzụrụ na-eme na Mobile
Tọzdee, Machị 3, 2016 Tọzdee, Machị 3, 2016 Douglas Karr
Ndi ibuotikọ oro ama odụri ntịn̄enyịn fo? Ọ kwesịrị. Yesmail na-enye akuko benchmark sara mbara site na nkeji iri na ise nke afọ 2015 na-ekpughe etu mmetụta mkpagharị mkpanaka si emetụta ụlọ ọrụ email. Ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ego mkpanaka na afọ gara aga na-ekwu maka onwe ha. Ọ bụ ezie na desktọọpụ ka na-eweta ọnụ ọgụgụ ịzụta ka ibu, ọ bụghị ihe nzuzo na ndị na-azụ ahịa na-adịwanye mma ịzụrụ site na ekwentị, yana data ọhụrụ sitere na Yesmail kwadoro nke a.
10 Email Tracking Metrics I Kwesịrị Inyocha
Satọde, Febụwarị 20, 2016 Sunday, Jenụwarị 15, 2017 Douglas Karr
Ka ị na-elele mkpọsa email gị, enwere ọnụọgụ metrik ị kwesịrị ilekwasị anya iji melite arụmọrụ ahịa email gị niile. Omume email na teknụzụ agbanweela oge - yabụ kpachara anya imelite ụzọ ị si elele arụmọrụ email gị. N'oge gara aga, anyị ekerịtala ụfọdụ usoro ndị dị n'azụ usoro metrik email. Ntinye igbe - izere nchekwa SPAM na nzacha Junk ga-enyocha ma ọ bụrụ
Elele nke Ule Kupọns na Ego
Sunday, November 29, 2015 Monday, November 30, 2015 Douglas Karr
You na-akwụ ụgwọ ego iji nweta ndu ọhụụ, ma ọ bụ na-enye mwepu ego iji dọta ha? Companiesfọdụ ụlọ ọrụ agaghị emetụ Kupọns na mwepu ego n'ihi na ha na-atụ egwu ịbelata akara ha. Otherlọ ọrụ ndị ọzọ dabere na ha, na-ebelata oke uru ha na-eweta n'ụzọ dị egwu. O doro anya na ha arụ ọrụ ma ọ bụ na ha arụghị. 59% nke ndị na-ere ahịa dijitalụ kwuru na ego na ngwugwu dị irè maka inweta ndị ahịa ọhụrụ. Ọ bụ ezie na ego dị iche na ịnwe uru dị mkpụmkpụ, ha nwere ike ibibi ihe
Chepụta Peeji Ngwaahịa E-commerce Dị Irè
E nwere ọtụtụ nde saịtị ecommerce na ebe ahụ, na ekele, ndị mmepe, ndị na-emepụta ihe na ndị na-ahụ maka ndụmọdụ na-arụ ọrụ na saịtị ecommerce anwalela ihe ọ bụla ederede ngwaahịa iji bulie ntụgharị. Invesp ebipụtawo ọnụọgụ na-atụ n'anya nke ọma ma a bịa na saịtị e-commerce: Ọnụego ịgbahapụ nke ụgbọ ibu azụmahịa bụ 65.23% Ogologo ntụgharị ntụgharị nke ụlọ ahịa E-azụmahịa bụ naanị 2.13% Ihe dị elu karịa ọnụ ahịa iji kwalite (AOV) obere Ngwaahịa peeji nke arụmọrụ